राजनीतिक – " कञ्चनजंगा News "
हाम्रो देशमा गफाडीहरु मात्र जन्मिएका छन्ः माधव नेपाल
No Comments on हाम्रो देशमा गफाडीहरु मात्र जन्मिएका छन्ः माधव नेपाल
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले देशमा गफाडीहरु जन्मिएको बताएका छन् । मंगलबार नेकपा एस मकवानपुरले हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधीहरुलाई बधाई तथा मतदाताहरुलाई धन्यवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले देशमा अनेक किसिमका गफ दिने गफाडीहरु जन्मिएको बताएका हुन् ।
उनले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई इङकित गर्दै रेल ल्याउँछु, के ल्याउँछु भन्दै गफ दिएको बताएका हुन् । ‘जनताले के के न आउला भनेर आस गरे तर केही पनि आएन’ उनले भने ।
उनले हेटौंडाको मेयरमा निर्वाचित मीना कुमारी लामालाई बधाई दिँदै विगतमा हेटौंडाका मेयरहरुले गरेका राम्रा कामहरुलाई आत्मसाथ गर्दै काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘शक्ति र संगठनलाई निर्माण गर्नुपर्दछ, असल गुण भएकाहरुलाई सम्मान गर्नुपर्दछ, उनले भने ‘हामीले असल मानिसहरुको खोजी गरिरहेका छौं, युवा पिढी खोजीरहेका छौं ।’
उनले आफ्ना कार्यकताहरुलाई धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र निर्वाचित भएका हर्कराज राई साम्पाङजस्तै बन्न आग्रह समेत गरेका छन् । असल गुण भएको मान्छेलाई सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै कार्यकर्ता र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सोहीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिए ।
No Comments on भरतपुर ताजा अपडेट : १,०१,९४५ मतगणना सकियो, कसको कति मत पुग्यो ?
भरतपुर महानगरपालिकामा एक लाख १९४५ मतगणना सकिएको छ । पछिल्लो मत परिणामअनुसार सत्ता गठबन्धनको मेयरकी साझा उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले ९०१९ मतले अग्रता कायम गरेकी छन् । रेनुले ४०,५८९ मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीले ३१,५७० मत प्राप्त गरेका छन् ।
यस्तै स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले १३,०६४ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै काँग्रेसबाट उप मेयरमा उम्मेदवार चित्रसेन अधिकारीले ४२,७३२ मत प्राप्त गरेका छन् भने राप्रपाकी उम्मेदवार हिमला गुरुङले २४,९९२ मत प्राप्त गरेकी छन् ।
मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । मेयरमा केदारप्रसाद गुरागाईंले कांग्रेसका शिवप्रसाद ढकाललाई ७ सय २७ मतले हराउँदै विजयी भए । ढकाल निवर्तमान मेयर हुन् । गुरागाईंले २१ हजार ४ सय ५ मत ल्याउँदा ढकालले २० हजार ६ सय ७८ मत ल्याए ।
त्यसैगरी उपमेयरमा एमालेकै अकली चौधरी विजयी भएकी छन् । उनले २२ हजार ४ सय ५२ मत ल्याउँदा माओवादी केन्द्रका नवराज चापागाईंले ११ हजार ३ सय मत ल्याए ।यहाँ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मेयर र उपमेयरमा गठबन्धन थियो । योसँगै मोरङका १७ पालिकाको अन्तिम परिणाम सकिएको छ ।
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको मेयर, उपमेयरमा कांग्रेस विजयी भएको छ । मेयरमा तोयप्रसाद शर्मा र उपमेयरमा भुलियाकमारी राना विजयी भएका हुन् । शर्माले १० हजार ६ मत प्राप्त गरे भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका पदम पुजाराले ४ हजार ६ सय ७४ मत प्राप्त गरे । एकीकृत समाजवादीका जीवनराज थापाले ३ हजार ७ सय ३४ मत प्राप्त गरे ।
रेणु दाहाललाई कसैले नसक्ने !
No Comments on रेणु दाहाललाई कसैले नसक्ने !
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा फेरि पनि रेणु दाहालको जित सुनिश्चित भएको छ । २८ हजार १९५ मत गन्न बाँकी छँदा पाँच दलीय गठबन्धनबाट मेयरकी उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी दाहालले ३९ हजार ४१६ मत प्राप्त गरेकी छन् ।
No Comments on कृष्णप्रसाद जसले मेयर जितेर पनि अबिर लाएनन्, विजय र्‍यालीमा सहभागी हुन पाएनन्
सत्तारुढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार शान्ता भण्डारीलाई एक हजार ८०१ मतान्तरले पराजित गरेर श्रेष्ठ सन्धीखर्कको मेयरमा निर्वाचित भएका हुन् । श्रेष्ठले ११ हजार १३८ मत ल्याए भने गठबन्धनकी भण्डारीले ९ हजार ३३४ मत मात्र ल्याइन् । उपप्रमुखमा पनि एमालेकी मिश्रा आचार्य ९ हजार ६४६ मतका साथ विजयी हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका राजेन्द्र भुसालले ९ हजार १६८ मत मात्र ल्याउन सके ।
मेयरमा निर्वाचित श्रेष्ठले विजयी भएर पनि अबिर भने लगाउन पाएनन् । विजयी जुलुसमा पनि गएनन् । आमाको मृत्यु भएपछि श्रेष्ठ किरिया बसेका छन् । उनले किरियामै बसेको बेला मतदान गरेका थिए श्रेष्ठकी आमा उमाकुमारी श्रेष्ठको वैशाख २६ गते ८६ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । आमाको निधन भएको ५ दिनका दिन वैशाख ३० गते अर्घाखाँची आवासीय मावि बेल्बाटिकाबाट मतदान गरेका थिए ।
निर्वाचित भएसँगै लोकान्तरसँगको कुराकानीमा श्रेष्ठले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नगरबाट भइरहको तीव्र बसाइँसराइ रोक्ने भएको बताए । ।
अन्तमा फराकिलो अन्तरले भरतपुर महानगरमा रेणु दाहाल बिजयी, एमाले भयो पत्तासाफ !
No Comments on अन्तमा फराकिलो अन्तरले भरतपुर महानगरमा रेणु दाहाल बिजयी, एमाले भयो पत्तासाफ !
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनबाट मेयरकी उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले फराकिलो अग्रता बनाएकी छन् ।
पछिल्लो परिणामअनुसार उनी आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीभन्दा ५ हजार ५१८ मतले अगाडि देखिएकी छन् ।
७३ हजार ७८७ गणना गर्दा मेयरकी उम्मेदवार रेनुले २८ हजार ६०८ मत प्राप्त गरेकी छिन् भने एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीले २३ हजार ९० मत ल्याएका छन् ।
त्यस्तै, स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले १० हजार १३ मत ल्याएका छन् ।
उपमेयरमा गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले ३० हजार ९०१ मत ल्याएका छन् भने एमालेले समर्थन गरेकी राप्रपाकी हिमला गुरूङले १७ हजार ९२० मत ल्याएकी छिन् । भरतपुरमा एक सातादेखि मतगणना जारी छ ।
देशको राजधानी सहर काठमाडौँ ‘बालेन्द्रमय’ भएको यो समयमा, सिद्धार्थ गौतमको पूजा–अर्चनाको उद्देश्यले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदी बुद्धजयन्तीको उपलक्ष्य पारेर सिद्धार्थ गौतमको जन्मभूमि लुम्बिनी आउनु संयोग मात्र थिएन ।
प्रधानमन्त्री मोदीजस्ता ज्ञानी पुरुषलाई सिद्धार्थ गौतमको जन्मस्थल लुम्बिनी हो भन्ने ज्ञान नभएको पक्कै होइन । तर, केहीपटक उनको मुखबाट बुद्धको जन्म भारतमा भएको वचन निस्केकै हो । सन्दर्भमा, यो पनि भन्न सकिन्छ– प्रधानमन्त्री मोदीले सिद्धार्थ गौतमबारे ‘गुगल सर्च’ नगरेको हुनुपर्छ ।
गुगल सर्चले इसापूर्व ५६३ मा जन्मिएका गौतम बुद्धको नागरिकता ‘नेपाली’ भनेर उल्लेख गरेको छ । गुगल सर्चका इतिहासकारहरूले सिद्धार्थ गौतमको जन्म नेपालमा भएको ठोकुवा गरेका छन् । त्यसलाई ‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ मान्न सकिन्छ । पूर्ण सत्य र तथ्यसंगत मान्न सकिँदैन ।
संसारका धेरै इतिहासकारले भनेका छन्– नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र देश हुन् । यी दुवै देश जतिसुकै प्राचीन भए पनि, इसापूर्व ५६३ को समयमा दुवै देशको भौगोलिक आकार र राष्ट्रियता तय भइसकेको थिएन ।
हिन्दू धर्मका साधक तथा राजनेता मोदीलाई यो ऐतिहासिक तथ्यको राम्रो जानकारी छ– सिद्धार्थ गौतमको नागरिकतामाथि नेपाल, भारत, श्रीलंका, बर्मा, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया वा अन्य कुनै पनि बौद्धमार्गी देशको दाबीको कुनै अर्थ छैन ।पहिलो त सिद्धार्थ गौतम सारा विश्व ब्रह्माण्डका नागरिक हुन् । संसारमा फैलिँदै गएको अशान्ति र युद्धका सम्भावनालाई समाप्त तुल्याउन सिद्धार्थ गौतमका चिन्तनमा आधारित बौद्ध दर्शनका पञ्चशील, समाधि र प्रज्ञाका सिद्धान्त प्रभावकारी हुने विश्वास संसारभर बढ्दै गएको छ । यो सम्पूर्ण मानव जातिका लागि सुखद कुरा हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमण निकै छोटो समयका लागि भए पनि नेपालको अस्पष्ट, अस्थिर र अधीर राजनीतिमा यो भ्रमणको राजनीतिक महत्व दूरगामी रहेको छ । नेपाल र भारतबीच शासन र सीमानाका विषयमा थुप्रै असहमति छन् ।
दुई देशबीच यी असहमतिको पहाड उपस्थित भए पनि सहमतिका बिन्दुहरू पनि थुप्रै छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको छोटो लुम्बिनी भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा ठूलै सुधार हुने आशा जगाएको छ । समय जटिल छ, आर्थिक र सामाजिक दुवै हिसाबले ।
पञ्चशील, समाधि र प्रज्ञाको भूमि नेपालको ओलाङचुङगोलादेखि लोमान्थाङ, डोल्पा र हुम्ला हुँदै बौद्ध धर्मका बिम्बहरू संसारभर फैलिएका छन् । तिब्बतमा दलाई लामाको सरकार हुँदा मुस्ताङको लोमान्थाङ र दोलखाका उत्तरी भेगसँग राजधानी सहर ल्हासाको व्यापक व्यापारिक सम्बन्ध थियो । त्यो सम्बन्ध टुटिसकेको छ ।
तर, धार्मिक सम्बन्ध टुटेको छैन । कतिपय आस्थाशील आत्माहरू नेपालतिर दौडिने अवसरको खोजीमा हुन्छन् । ती क्षेत्रका आस्थाशील मनमा रहेको सिद्धार्थ गौतमको चित्र धमिलो भएको छैन । तिब्बतको जटिल भूगोल भ्रमणको मौका पाउने पर्यटकहरू तिब्बतमा बौद्धधर्मको जरो अहिलेसम्म बलियो रहेको बताउँछन् ।
तिब्बतको राजधानी ल्हासामा अहिले तिब्बती जनसंख्या नगण्य छ । यसको अर्थ चीनले बौद्धमार्गी तिब्बती जनताको पूरै सफाया नगरे पनि उनीहरूलाई देशको अनकण्टार भूभागतिर थन्क्याइसकेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमण सफल पार्न नेपाल सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेन । नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री तथा ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री डा. नारायण खड्का भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आवाभगतमा बिहानैदेखि खटिएका थिए ।
शारीरिक र मानसिक दुवै प्रकारका अस्वस्थताका बाबजुद प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग संयुक्त रूपमा बुद्धपूजनमा लागेका थिए ।
एकातिर वीर अस्पतालमा जीवन र मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेका क्यान्सरपीडित भाइको चिन्ता, अर्कातिर बुद्धजयन्तीको पवित्र अवसरमा बुद्ध अर्चनाका लागि छिमेकबाट आएका साधु तथा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको स्वागत–अभिनन्दन गर्नुपर्ने कर्तव्य । प्रधानमन्त्री देउवाका लागि समय अत्यन्त पीडादायक थियो ।
यसबारे मैले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग बिहीबार अपराह्न प्रश्न गरेँ, ‘के प्रधानमन्त्री देउवाको स्वास्थ्य र मानसिक अवस्थाबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएर संकट टार्न सकिँदैनथ्यो ?’ डा. खड्कासँग यसको कुनै जवाफ थिएन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पवन इन्टरनेसनल होटलमा स्वागत गर्ने जिम्मेवारी डा. खड्काकै थियो । उनले भने, ‘म भोजमा थिएँ । भोजमा त म भइहाल्छु ।’
परराष्ट्रमन्त्री खड्काको जवाफ चित्तबुझ्दो थिएन । उनको भनाइमा, ‘समयको ठूलो चाप थियो । प्रधानमन्त्री देउवालाई पीडादायक अवस्थाबाट अलिकति फुर्सद दिने अवसर पनि थिएन । दुवै प्रधानमन्त्रीले सँगै बुद्धपूजा र ध्यान गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो ।
यसमा हामी फेरबदल गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काको यो कथन नेपाल सरकारको दयनीय अवस्थाको विवरण हो । नेपाल सरकारलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी आगमनको सूचना धेरै अगाडि प्राप्त भइसकेको थियो भन्नु उल्टो कुरा हुनेछ ।वास्तवमा भारतका ‘माननीय’ (अनरेबल) प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपालका ‘सम्माननीय’ (राइट अनरेबल) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिल्यै निम्तो पठाइसकेका थिए । त्यो निम्तो लुम्बिनीको जंगलमा अलमलिएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री देउवा अचानक अस्वस्थ भएपछि र उनी भ्रातृ–वियोगको अवस्थामा रहेका वेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई यो जानकारी दिनुपथ्र्यो । तर, त्यसो गरिएन । शारीरिक र मानसिक दुवै हिसाबले अस्वस्थ रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई जबर्जस्ती घिसारेर ल्याइयो, प्रार्थनास्थलमा ।
त्यो अप्रिय दृश्य सारा टेलिभिजनले देखाए । पत्रपत्रिकामा छापियो । क्यानडामा अर्थशास्त्र पढेर त्यहीँ बिहे गरेका, त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनको अनुभव हासिल गरेका परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने प्रोटोकलको ज्ञान थिएन ? थिएन भने सेनाका मानिससँग सोध्न सक्दैनथे ?
नेपालले राजा–महाराजाले चलाएको ल्याङप्mयाङे परराष्ट्र नीतिमा सुधार गर्न सकेको छैन । भाइ–भारदार र डिट्ठा–खरदारको मानसिकताले परराष्ट्र नीति हाँकिरहेको छ ।
राजाको पालामा भारतसँग वार्ता गर्न दिल्ली पुग्ने तत्कालीन श्री ५ को सरकारका अधिकारीको पहिलो काम दिल्लीको प्रसिद्ध साडी बजार करोलबागमा किनमेल गर्नु हुन्थ्यो । अहिले आफ्ना सन्तानका लागि छात्रवृत्ति खोज्नु रहेको छ ।
जे होस्, भारतका प्रधानमन्त्री मोदी कुशी नगरको छोटो बाटो हुँदै मनीषीका रूपमा लुम्बिनी आए । मनीषीकै रूपमा दिल्ली फर्किए । जाँदाजाँदै नेपालीको मनमा ‘आशाको बिउ’ रोपे ।
मोदीजीले जनकपुरको भ्रमण गर्दा पर्यटकको चाप ‘ह्वात्तै’ बढेको थियो । मुस्ताङ जाँदा त्यहाँ पनि पर्यटक ‘ओइरिए’ । अब, लुम्बिनी आएका छन् । यो ठाउँको पनि केही ‘कल्याण’ होला कि ?
माधव नेपाल र प्रचण्डको पार्टीले एक सिट पनि जिते सबै सम्पत्ति त्यागेर वृन्दावन जाने वाचा गरेका दुर्गा प्रसाई अब त यसो पो भन्न थाले
No Comments on माधव नेपाल र प्रचण्डको पार्टीले एक सिट पनि जिते सबै सम्पत्ति त्यागेर वृन्दावन जाने वाचा गरेका दुर्गा प्रसाई अब त यसो पो भन्न थाले
नेताहरुप्रति पछिल्लो समय जनताको वितृष्णा बढ्नु मध्ये प्रमुख कारण हो उनीहरु आफ्नो बोलीमा स्थिर रहन नसक्नु । पद, प्रतिष्ठा र पैसा कमाउन जे पनि भन्दिने र बोल्दिने हुनाले जनताहरुको नेताप्रतिको विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ ।
यसैबीच, स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एक ‘सिट’ पनि जिते आफू सन्यास लिएर वृन्दावन जाने वाचार गरेका नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईंले बोली फेरेका छन्। प्रकाश सुवेदीको टेलिभिजन कार्यक्रममा उनले आफ्नो बचाउ गरेका हुन् ।
अघिल्लो वर्ष २६ चैतमा भक्तपुरको सूर्यविनायकमा आफूले सञ्चालन गरेको २ अर्ब बढी लागतको तरकारी बजारको उद्घाटन क्रममा उनले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एक स्थानमा मात्रै जिते भने पनि आफ्नो सबै सम्पत्ति त्यागेर सन्यासी बनी वृन्दावन जाने बताएका थिए।
कार्यक्रमको शुरुमै उक्त भिडिओ क्लिप देखाउँदै सुवेदीले प्रसाईंलाई सोधेका थिए, ‘अब कहिले जाने त वृन्दावन ?’ उक्त प्रश्नको जवाफमा प्रसाईंले भने, ‘वृन्दावन किन जानुप¥यो मैले ? मैले भन्या छु त गठबन्धन नगरेर एक्लाएक्लै जितेर आउनुस् भनेर।”
तर भिडिओमा गठबन्धन नभनेको भन्दै थप प्रश्न सोधिएपछि प्रसाईंले आफूले स्क्रिप्ट लेखेको र त्यसमा गठबन्धन लेखेको बताए। चुनावमा जित्नका लागि टाउको काटेर फाल्छु, कान काटेर फाल्छु भनेर भन्ने गरिएकोमा यसको मतलब विपक्षीको मनोबल घटाउनका लागि भन्ने गरिएको उनले बताए।
No Comments on स्वर्ग जान नर्कको टिकट काटेका माधव नेपाललाई एमालेले एक सुकामा पनि लिँदैनः सूर्य थापा
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाले आफ्नो पार्टीको कन्तबिजोग, हरिबिजोग, ऋषिबिजोग केही पनि नभएको दाबी गरेका छन् । नेता थापाले भने, “स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनमतको हिसाबले नेकपा एमाले कमजोर भएको होइन । जनताले सबभन्दा बढी भोट एमालेलाई नै दिएका छन् ।
५ दलले गठबन्धनलाई कसिलो बनाएकाले केही ठाउँमा हामीले हारेका हौं । एमालेको कन्तबिजोग, हरिबिजोग, ऋषिबिजोग केही भएको होइन ।” निर्वाचनमा केही ठाउँमा असफल हुँदैमा केपी ओलीले अध्यक्ष पद छाड्नु नपर्ने पनि थापाको जिकिर छ । उनले भने, “अहिले पनि नेकपा एमालेलाई ५० लाख जनताले मतदान गरेका छन् ।
यो मतादेश, जनादेशलाई सम्मान गरेर केपीले देशको नेतृत्व गर्ने हो । कतिपयले केपी ओलीले छाडिदिए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा गरेका होलान् । उहाँले छाडे हाइसन्चो होला, कब्जा गरौंला भन्ने दिवास्वप्न देख्नुहुन्न ।”
नेकपा एमालेलाई प्रचण्ड र माधव नेपालको आवश्यकता नरहेको पनि उनले बताए । उनले भने, “माधव नेपाल पनि कुनै कुरा गर्ने हो ऋषिजी ? घिनलाग्दो कुरा नगर्नु न बिहान बिहानै ।
उहाँ त शेरबहादुर देउवाका कान्छी औंला हो । हामी हिलो र धुलो टकटकाएर उठ्छौं । तर हामीलाई माधव नेपाल, प्रचण्डको सहयोग चाहिएको छैन । एमालेले माधव नेपाललाई एक सुकामा दिए पनि लिनुहुन्न । उहाँले गर्न नहुने सबै हर्कत गरिसक्नुभयो । प्रचण्डको पुच्छर समाएर बैतरणी हुँदैन भन्नेमा नेकपा एमाले प्रस्ट छ ।”
आफ्नो जिल्ला प्युठानमा माधव नेपालको पार्टी शून्य भएको पनि उनले बताए । थापाले थपे, “मेरो प्युठान, अर्घाखाँचीमा माधव नेपालको पार्टी आलु आलु छ । अब कांग्रेसले कांग्रेसलाई भोट हालेको स्थितिमा कहीं पनि जित्दैन । माधव र प्रचण्डले स्वर्ग जान नर्कको टिकट काटेका हुन् । शेरबहादुर देउवाको हुक्के, बैठके भएर कांग्रेसको कृपामा केही सिट जितेका हुन् ।
प्रतिपक्षविरुद्ध गठबन्धन गरेर बाघ मार्यौं भनिरहेका छन् । माधव नेपाल, प्रचण्ड, चित्रबहादुर केसीसँग वार्तासार्ता पानी अनलाइनको कुरा हो ।”
एमाले नेता थापाले लुम्बिनी र गण्डकीको प्रदेश सरकार अनि केन्द्रमा कांग्रेसको नांगो दलाली गरेर मोहनविक्रम सिंह र चित्रबहादुर केसीले केही सिट जितेको पनि आरोप पनि लगाए ।
उनले भने, “मेरो पालिका झिमरुखमा ३० वर्ष राइदाइँ र दलमलन गरेको, यहाँका रुखपात, ढुंगामाटो मसाल हुन् भन्ने राजमोले कांग्रेससँग मिलेर पनि जित्न सकेन ।
झिमरुखमा २ वडा पाएको छ । अब झिमरुखमा मसाल उँधौली लाग्यो । त्यसैले मोहनविक्रम सिंह रुवाबासी गरिरहेका छन् । मसालले अघिल्लो संघको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको भूलभूलैयामा लाभ उठायो । ८४ वर्षे बूढाको दाल, चामल चलोस् भनेर हामीले सहयोग गरेको हो । अब त्यो सम्भावना छैन ।”